China huku Chop pamwe Pepper fekitari uye vagadziri | Huikang
Nzira yekugadzira imwe
1 huku mahudyu mapfupa abviswa, wedzera 1/4 hanyanisi, 2 zvimedu zvejingi, 2 maspuni ewaini yekubika, chidimbu checallion chena, simmer kwemaawa mashoma muhari yekushongedza, uye shandisa forogo kuburitsa zvidimbu zvisingaverengeke zvechidya nyama Buri diki.
2.1 maaspuni eupfu mutema mhiripiri, 2 maspuniji ekubikisa waini, 1 kiyipuni yechiedza sosi muto, 2 maspuniji ewaini tsvuku, hafu yepuniki yepepuru nyowani tsva, 2 mashupuni eoyster muto, 1 punipuni yeshuga, munyu mudiki, chekai anyanisi matsva ekushandisa mushure, mune crisper Isa rukoko rwehuku dzehuku pamwe nechero yeonion mbishi woisa mufiriji husiku hwese. Tendeuka kana paine chero chinhu.
3. Chekerera chidimbu chebhotoro ~ chinofanira kunge chiri mukati me10G, sunga hanyanisi, uye kana hanyanisi yakanyorova, wedzera muto wakabikwa nemapfupa ehuku, 1 kapuni yetomasi muto, zvipunu zviviri zvewaini tsvuku, 2 mapuni e soy muto, 1 punipuni nhema mhiripiri, hafu yepuniki yepepuru nyowani nyowani, yakaringana shuga uye munyu, fambisa zvakanaka, wedzera mbatatisi yakakwenenzverwa, fambisa zvakaenzana, pakupedzisira muto wakakora uye unogona kudzima kupisa.
4. Bika howa pamwe chete nezviyo zvezviyo, songa nebhotoro, wozviisa mukapu diki yakagadzirwa nekabhuruu yepepuru.
5. Isa mbatatisi dzakapiswa uye makarotsi muhari uye wozvipisa kusvikira muchinjikwa uri wegoridhe, ipapo unogona kuzviisa mundiro.
6. Wedzera 10G ruomba uye anonhuhwirira hanyanisi shreds.
7. Chekutanga, fry ganda rehuku kune rimwe divi, wedzera chipunu chewaini tsvuku, pusha steak yehuku ne spatula, uye fry kwemaminitsi maviri kwemaminetsi maviri.
8. Gadzirira chibage, mazai, nezvimwe.
9. Isa ndiro yacho.
10. Kana huku iri kunze kwehari, inogona kudyiwa.
Production nzira mbiri
1. Debone huku chidya zvidimbu, uzvirove kumberi kwechinguva, wozozvirova neseri;
2. Wedzerai waini yekubika, nyama yakachekwa, mashanu-zvinonhuwira hupfu, muto muto muto, sanganisa zvakanaka woita kuti ifambe mariri husiku mufiriji;
3. Dururirai mafuta mupani, wedzerai marinated chicken chops, uye fry kwemaminitsi mashanu kumativi maviri;
4. Fry kusvikira nyama yagadzirwa uye icheke kuita zvidimbu zvidiki;
5. Svina muto mutema mhiripiri.
Pashure: Kung Pao Chicken
Zvadaro: Yakarukwa Nguruve Yakachengetedzwa
Frozen Bhero mhiripiri Uye hanyanisi
Frozen Diced Peppers Uye hanyanisi
Frozen Green Peppers Uye hanyanisi
Mahwanda Akaomeswa Uye Hanyanisi
Yakanaka Uye Sour Spare Ribs